SACUUDIGA oo shaaciyey maalinta ay tahay CIIDDA - Caasimada Online
Home Warar SACUUDIGA oo shaaciyey maalinta ay tahay CIIDDA
SACUUDIGA oo shaaciyey maalinta ay tahay CIIDDA
Muqdisho (Caasimada Online) – Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijisay in Arbacada berri ay tahay maalinta u dambeysa ee bisha Soon, maadaama galabta la waayey bilashada bisha Soonfur ee Shawaal.
“Guddiga aragtida dayaxa ee Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijiyay Talaadadii in dayaxa bilaha ah oo curanaya bilowgii Shawaal aan la arkin. Sidaas darteed, Arbacada 12-ka May waxay noqon doontaa maalinta ugu dambeysa iyo 30-ka Ramadaan, Khamiista 13-ka May waxaa loo arki doonaa maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga,” ayaa lagu yiri qoraal goordhaw ay soo saartay dowladda Sacuudiga.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli kala xaqiijin tallaabada ay shacabka Soomaaliyeed qaadanayaan berri, balse waxaa lagu wadaa in wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta ay warbixin siiso shacabka.
Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa Talaadadii maanta ku beegneyd 29, waxaana loo badinayaa in berri la buuxi doono 30-ka, waxaana xusid mudan in bishii hore ee Shacbaan ay ku dhamaatay 30 maalmood.